Hilton, Marriott uye G6 Hospitality inozivisa zviitiko zvehotera muHonduras
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hospitality Industry » Hilton, Marriott uye G6 Hospitality inozivisa zviitiko zvehotera muHonduras
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Honduras Breaking News • Hospitality Industry • Investments • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Honduras iri kuwedzera mukurumbira senzvimbo yekushanyirwa uye yekudyara kwave kutungamira mukuwedzeredzwa kwazvino kubva kune vakawanda nyika dzakadai seHilton, rinova iro razvino boka rehotera kuzivisa ramangwana mune ino nyika yeCentral America.
Mwedzi wapera, Hilton akazivisa kusaina kwechibvumirano chekutungamira neDesarrolladores Asociados de Honduras (DAH) yekushandira kuvaka nyowani 173-kamuri hotera yeHilton Garden Inn muTegucigalpa. Yakarongerwa kuvhurwa muna 2021, hotera ichaunza Hilton Garden Inn, Hilton's upscale asi inodhura yepasi rose mhando yemahotera, kuguta guru renyika uye guta hombe.
Hilton Garden Inn Tegucigalpa ichaita chikamu cheyakavhenganiswa-yekushandisa iyo ichave imba yeReal De Minas Mall, hofisi nzvimbo uye sarudzo dzevaraidzo. Inowanikwa angangoita mamaira 7.5 (makiromita gumi nemaviri) kubva kuToncontín International Airport, hotera yacho ichave iri panzvimbo yeBoulevard Juan Pablo II mukati meguta, padhuze nemabhizimusi makuru uye zvinokwezva zvekushanya, senge nhoroondo yeguta repakati uye Presidential Palace. Hilton Garden Inn Tegucigalpa ichava yechitatu Hilton chivakwa muHonduras mushure meHilton Princess muSan Pedro Sula, yakavhurwa muna 12, uye Indura Beach & Golf Resort Curio Ungano naHilton, iri kumahombekombe ekuchamhembe kweTela Bay, yakabatana neHilton's portfolio muna 2006.
Hilton haisiriyo chete hombe hotera kuzivisa kuvhurwa kana kuwedzera kwekuvapo kwayo muHonduras. G6 Hospitality yakasaina chibvumirano chebudiriro mukupera kwaNdira neInterAmerican Development Group, Inc. (IADG) kuunza Motel 6 kana Studio 6 chivakwa kuHonduras mukati memakore mashanu anotevera, nemari inosvika US $ 4.5 miriyoni.
Marriott International yakazivisa kuti ichavhura ruvazhe rwayo rwekutanga neMarriott pfuma muSan Pedro Sula, Honduras muna 2018. Iyi ndiyo ichava hotera yechipiri yepotifoliyo munyika mushure meTegucigalpa Marriott Hotel, chinhambwe chidiki kubva kuPresidential Palace. Inowanikwa pakati peRio de Piedras nharaunda, Chivanze naMarriott San Pedro Sula chinobvumidza kupinda nyore kuRamón Villeda Morales International Airport uye nharaunda huru dzekushanya dzakadai seMuseum yeAnthropology.
Pamusoro peHilton neMarriott, mapoka ehotera akadai seInterContinental Hotels Group, Hyatt Corporation, La Quinta Inns & Suites uye Choice Hotels (CHH) agara aripo mumadhorobha makuru nenzvimbo dzekushanyira dzeHonduras, zvichiita kuti nyika ive sarudzo inowedzera inokwezva. yemhuri dziri kutsvaga nzvimbo nyowani yezororo, vanamuzvinabhizimusi vanotsvaga mikana mitsva yekudyara kana vanofarira vanoda kunakidzwa nezvishamiso zveHonduras.
InterContinental Hotels Group: Iyo Holiday Inn Express Tegucigalpa iri mumoyo wedunhu idzva rezvemari nekutengeserana uye isingasviki mamaira kubva kuMetropolis Business Tower, nepo Holiday Inn Express San Pedro Sula iri maminetsi mashoma kubva kumakambani akadai seUnilever uye Imvesa, Global Agency uye Banco de Occidente. Ese ari maviri InterContinental Tegucigalpa uye Real InterContinental San Pedro Sula ari mukati memakiromita ekufamba kwenzvimbo dzemaguta avo dzakasarudzika uye dzemari matunhu. Iyo yepamusoro-soro Crowne Plaza San Pedro Sula inopa vashanyi mamwe emamwe maonero anoshamisa eguta.
• Hyatt Corporation: Hyatt Nzvimbo Tegucigalpa inopa vafambi vebhizinesi sarudzo yakasarudzika asi yakasununguka. Inowanikwa muLos Próceres Commerce Park, pakati penzvimbo dzinoyevedza uye dzakakurumbira dzeguta, hotera iyi zvakare ine panoramic maonero.
La Quinta Inns & Suites: LQ Hotel Tegucigalpa, hotera yazvino 2.5 mamaira (makiromita mana) kubva kuToncontín International Airport uye padyo nenzvimbo yekutengesa yeguta reCascadas, inzvimbo yepakati uye inodhura kune vashanyi vanoenda kuguta reHonduras. La Quinta Inns & Suites zvakare inotarisira zvivakwa muSan Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca neComayagua.
Mahotera eSarudzo: Inowanikwa muHonduras, Mahotera eChoice anoshanda mahotera eClarion muCopán, Roatán, San Pedro Sula neTegucigalpa, ichipa nzvimbo dzakakura dzekugara kune vebhizinesi nevanozorora zvakafanana.
Honduras inopa yakachena mahombekombe, mhandara mvura inonaya, maguta emakoloni uye pre-Mepanishi matongo nzvimbo, zvichibvumira vafambi vemarudzi ese kuti vawane chimwe chinhu chekunakidzwa.
Yakavakirwa muCaribbean uye iri pamuganhu weMesoamerican Barrier Reef, yechipiri pakukura reef system munyika, Bay Islands ari pakati pekukosha kwekushanya kweHonduras, achiunganidza mibairo yekuchengeta mamwe emahombekombe epasirese epasi, nzvimbo dzekudonha, madoko nenzvimbo. kuenda pamudyandigere. Zvitsuwa zvinoverengeka pakati penzvimbo shoma pasi pano apo vafambi vanogona kushambira nehove huru kwazvo pasi, whale shark.
Iine nzvimbo makumi mapfumbamwe nenomwe dzakachengetedzwa uye mapaki emunyika pamwe chete anoverengera 91 muzana yenharaunda yenyika, Honduras inounza vashanyi padyo nezvakasikwa. Iyo Pico Bonito uye Celaque National Parks inopa mwaka kana kupotera zvachose kune dzinopfuura mazana manomwe emarudzi akasiyana eshiri. Nyika inogara kuRío Plátano Biosphere Reserve, UNESCO World Heritage Site; Lancetilla Botanical Gardens, kechipiri chegadheni rebhotani munyika; nzvimbo yakakura kwazvo yemhandara inonaya mvura kusango kuchamhembe kweEquator; uye pakakwirira pakakwirira peCentral America, ichikwira kusvika pamamirioni 27). Honduras zvakare inzvimbo yepasirese-rafting yekuenda, neRio Cangrejal, imwe yenzizi dzeCentral America dzinosvikika uye dzakanaka, dzichipa Kirasi II kusvika IV rapids munzira yayo yemakiromita makumi maviri kubva kuPico Bonito National Park kuenda kuCaribbean.
Honduras inochengetera akasiyana ekuchera matongo uye enhoroondo ekushanya zvipiriso senge Mayan yekuchera matongo nzvimbo yeCopán, UNESCO World Heritage Saiti. Maguta ekoloni echiSpanish eGracias neComayagua ndemamwe anofadza kwazvo muLatin America, iine machechi akachengetedzwa zvakanaka uye zvimwe zvivakwa zvekare. VaGarifuna, vazukuru vevaranda vemuAfrica vanogara mumahombekombe eHonduras eCaribbean, vanodada nekuchengetedza tsika dzavo.